Arday Dhigta Jamaacada Hargeysa Oo Dhanbal Qiimo Badan U Diray Madaxweynaha Cusub Ee Somaliland | Hangool News
Arday Dhigta Jamaacada Hargeysa Oo Dhanbal Qiimo Badan U Diray Madaxweynaha Cusub Ee Somaliland
13 nov 2017 waxa guud ahaan Somaliland looga dareeray doorashada kursiga ugu sareeya qaranka jamhuuriyada somliland,waxaanad ku guulaystay hanashada kursiga u sareeya Somaliland,Mudane madaxweyne waxa kugu doortay shacbi waynaha Somaliland oo kuu gartay inaad tallada dalka Haaneeddo.
Gallad Eebe weeyaano guulle wa kugu garab galay.
Mudane madaxweye waxaad dhawaan La waregi doontaa Dal Nabada,qaran dhisan bulsho duruufaha siyaasadeed ku kala irdhowday kalana fogaatay,waxaa ku sugaya maaraynta Sixir barar xadhkaha goostay ee xukuumadii kaa horaysay ku fashilantay,Musuqmaasuq baahsan oo shacabka ragaadiyay,Hoos u dhaca qiimaha wax-barashda Caafimaadka xag kasta waxaa kuu weheliya arrimo iyo duruufo adag oo kaa hor iman doona una baahan inaad ku sii socoto go,aamadadii iyo ka dhabaynta halbeeg siyaasadeedkagii aad duruufaha iyo durdurada siyaasadeed kaga soo gudubtay,kuna kastbatay shacbiwaynahii kuu codeeyay waxaanad kaga gudbi kartaa Hogaamintaada iyo hadba qorshayaashaada siyaasadeed ee aad la timaado.
Mudane Madaxweyne, anigoo ka mid ah dhalinyarada wax ku barta Dalka islmarkaana xog badan ka haya manta dhibta dhalinyarada ka haysta dhinaca shaqo la,aanta waxaan mar labaad ku xasuusinayaa in dhaliyaradu tahay laf dhabarta qarankan sidoo kale bulshada Somaliland ay ka yihiin 75% Dhalinyaradu waa xooga ugu fir fircoon ee ummad walibaa leedahay, waana muraayada kaliya ee laga eegto waxa bulsha kastaa ku danbeyn doonto mustaqbalka, oo hadii ay kaalintoodu tahay karti iyo hufnaan la saadaaliyo in masiirka ummadaasi uu himilo wanaagsan ku danbeyn doono, maadama ay yihiin hogaanka iyo mustaqbalka bari, Waana kuwa dalkooda iyo dadkooda meel gaadhsiin kara.
Mudane Madaxweyne, Sidaynu ka wada warqabno Heerka shaqo la,aanta dhalinyarada wax baratay ee ka soo baxay jaamacadaha Dalka iyo kuwa Dibadaba sanadba sanadka ka danbaysa way sii kordhaysaa.Maanta kumanaan dhalinyaradaa ka mid ahi waxay ku dhinteen baddaha,kumanaan kun oo kale waxay ku jiraan jeelasha Magafayaasha,iyo manaxaanka ee Libiya iyo Yemen qaarkood Jaziirado ayay ku xidhanyihiin,qaar kale waxa gaaf warg wadamada yurub.
Taas ayaa waxa dadka darsay arrimahasi ku tilmaamen inay qarankooda ka dhex arki waayen sawir quruxbadan iyo mustaqbal ifaya,kana waayeen barnaamij siyaasadeedyo si wacan loo hufay.
Waxa uu dib-u-habayn ku samayn doonaa xeerarka shaqada iyo shaqaalaha si loo ilaaliyo caddaaladda, hufnaanta iyo shaqaaleysiinta dhallinyarada.
2. Waxa uu hirgelin doonaa Barnaamijka Laylinta Dhallinyarada Qaranka (National Internship Program), kaas oo ay ka faa’iidaysan doonaan dhallinyarada ka qalin-jebisa jaamacadaha dalka iyagoo fursad u heli doona in ay helaan fursad waayo-aragnimo oo u suurtagelisa in ay shaqo rasmi ah helaan.
3. Waxa uu hirgelin doonaa barnaamijyo dhallinyarada lagu siinayo xirfado ay iskood ugu shaqaysanayaan, noloshoodana ku dabari karaan.
4. Waxa uu hirgelin doonaa in dhammaan shaqooyinka ay qaban karaan muwaadiniinta JSL, gaar ahaan dhallinyaradu, ee ay bixiyaan Hay’adaha Caalamiga ah, shirkadaha caalamiga ah iyo Shirkadaha maxaliga ahba, aanu qaban qof shisheeye ah.
5. Waxa uu dhiirrigelin doonaa hal-abuurka ganacsi ee dhallinyarada. Si taasi u hirgasho, waxa uu fududayn doonaa daymanka bangiyadu bixiyaan oo aan dulsaar lahayn si dhallinyaradu u helaan dhaqaale ay ganacsiyo fudud ku abuuri karaan.
6. Waxa uu u qoondayn doonaa 60% shaqaalaha dawladda Somaliland in ay noqdaan dhallinyaro. Hawraarsan se waxa la sugaaba waa ka dhabaynta iyo hirgalinedaba.
Waxan ku soo afmeerayaa guud ahaan shacbi waynaha Somaliland waxay u dhegtaagayan ka dhabaynta Barnaamij siyaasadedkaagii tallaabooyinka aad qaadi doonto,waxaan kuu rajaynaynaa inaad noqoto madaxweyne qaranku mahadiyo,oo horumar ballaadhan oo bulshadu mahadisana sameeyo.
Shakir A. Kaariye
Universty of Hargeisa